असफल भइने डरलाई कसरी हटाउने ? - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips असफल भइने डरलाई कसरी हटाउने ?
असफल भइने डरलाई कसरी हटाउने ?
असफल भइने डरले मानिसहरु काम सुरु नै गर्दैनन् । त्यो डरले उनीहरु आफ्नो क्षमतालाई खेर फालिरहेका हुन्छन्, आफ्नो समयलाई खेर फालिरहेका हुन्छन् र आफ्नो सपनालाई आफैले मारिरहेका हुन्छन् ।
डर भनेको केही नगरे सोंचेर बस्दा मात्र आउँछ । जब काम गर्न थाल्नुहुन्छ, साना-साना सफलता तथा साना-साना सिकाइले तपाईंमा विस्तारै डर हट्दै जान्छ । असफल हुनुभयो भने पनि तपाईंमा अगाडी आउने बाधाको सामना गर्ने हिम्मत बढ्छ । सोंचेर नबस्नुहोस्, काम सुरु गर्नुहोस्।
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, ” गल्ती नै नगर्ने त्यो व्यक्ति हो, जसले जीवनमा केही गर्न प्रयास नै गरेन ” । यो भनाइलाई मनन गर्नुहोस् र गल्तीलाई असफलता होइन, सिकाइको रुपमा लिनुहोस् । जीवन सिकाइ तथा परिक्षण हो भन्ने बुझ्नुहोस् । तपाईं परिक्षा देखि डराएर स्कुल नै नगएको भए, आज यसरि यो पोस्ट पढ्न सक्ने हुनुहुन्थ्यो त ? अरुले यो गर भनेर होइन, आफ्नो मनले प्रेरित हुनुहोस् । जब मनमा केही प्राप्त गर्ने तिव्र चाह हुन्छ, तब असफलताको डर हटेर जान्छ ।
सबैभन्दा पहिले आफ्नो लक्ष्य, योजना र गरिरहेको कामको बारेमा स्पष्ट हुनुहोस् । पूर्वतयारि गर्नुहोस्, जसरि परिक्षाको लागि विद्यार्थीले पढेर आफूलाई तयार गरिरहेको हुन्छ । कामको पूर्वतयारीले तपाईंमा असफल हुने डर हट्छ, आत्मविश्वास बढ्छ र तपाईंले धेरै नयाँ कुराहरु सिक्नुहुन्छ।
समय तालिका बनाएर काम गर्नुहोस् र समयलाई महत्व दिनुहोस् । यदि तपाईंले समयलाई चिनेर सुरुमै काम गर्न थाल्नुभयो भयो भने, गल्ती भयो भने सच्याउने, सोंचेर, बुझेर काम गर्ने समय रहन्छ । त्यसले आत्मविश्वास बढ्छ र असफल हुने सम्भावना समेत कम हुन्छ । तर समय सिमा सकिने बेलामा काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईं हतास बन्नुहुन्छ, सोंचेर तथा बुझेर काम गर्ने समय पनि रहन्न र असफल हुने डरले झन् काम बिग्रिन्छ ।
आफूसंग कुरा गर्नुहोस् । आफ्ना योजनाहरु तथा आफ्नो लक्ष्य आफैलाई बुझाउने, ऐना अगाडी उभिएर बोल्ने गर्नुहोस् । आफ्ना राम्रा पक्षलाई कसरि उजागर गर्ने र आफ्ना कमजोर पक्षलाई कसरि सुधार गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
आफ्नो कामको क्षेत्रका मानिस, सकारात्मक सोंच राख्ने, आफूलाई माया गर्ने, हौसला दिने मानिसहरुसंग भेटघाट गर्नुहोस् । जब तपाईंले केही गर्छु नै भनेर त्यसमा निरन्तर लाग्नुहुन्छ, तब तपाईंलाई सहयोग गर्ने मान्छे पनि जुट्नेछन् । म एक्लो छु होइन, मेरो वरिपरि मलाई सहयोग गर्ने मानिसहरु पनि छन् भन्ने कुरा मनमा राख्नुहोस् ।
आलोचनाहरुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुहोस् । हरेक व्यक्तिको, हरेक कामको कसै न कसैले आलोचना गरिरहेको हुन्छ नै । यदि आलोचनालाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्नुहुन्न र कसले के भन्ला भन्ने डरमा बस्नुहुन्छ भने जिन्दगीमा केही पनि नगर्नुस् ।
Previousविल्सन मिज्नरका जीवनोपयोगी भनाइहरु
Nextलद्दु विद्यार्थी पछि विश्वप्रसिद्ध न्युरो सर्जन, लेखक तथा राजनीतिज्ञ